Banyere Anyị - Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Ihe Co., Ltd.,nke e guzobere na 2004, ọ bụ onye nrụpụta pụrụ iche nke mgbidi PVC na mbadamba ụlọ, ịkpụzi ụfụfụ PVC, profaịlụ PVC / WPC na PVC / WPC mputa mpụga, nke kwekọrọ na nchekwa gburugburu ebe obibi. Factorylọ ọrụ anyị dị n'akụkụ ọmarịcha ịma mma nke Mogan Mountain na Wukang, Deqing, Zhejiang Province. E nwere kilomita iri anọ na ise site na West Lake na Hangzhou na kilomita 160 site na obodo ukwu-Shanghai. Yabụ njem na mpaghara a kachasị adaba.
Anyị nwere ihe karịrị 30 injinia na technicians ndị ọkachamara na-emepe emepe ọhụrụ ngwaahịa. Ngwaahịa anyị nwere afọ ojuju na arịrịọ nke ndị ahịa. All iche iche nke ụdị, ihe nakawa etu esi & na agba anyị mepụtara na-eduga ejiji na Chinese mma ubi. Anyị nwere ụlọ ahịa ihe karịrị 140 ma nwee ọtụtụ patent na china. Enwere ike ịchọta ngwaahịa anyị n'ụwa niile dịka Europe, Middle East, Asia na America.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ. Anyị na-atụ anya na-akpụ mmekọrịta azụmahịa na ahịa si n'ụwa nile!
A mụrụ mpempe akwụkwọ mbụ nke PVC Panel na akara nke Huazhijie, nke jupụtara na oghere oghere dị elu nke dị elu na china.
Deqing Huazhijie cochọ Mma ihe onwunwe co., LTD. tọrọ ntọala.
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Ihe Co., Ltd. tọrọ ntọala. Ebumnuche iji gbasaa ma kwalite nkà na ụzụ nke PVC na WPC Foam na akara nke Huaxiajie.
No.2 ogbako e tinyere na mmepụta. Ebe ogbako ruru 30000 square mita kpamkpam.
Wee na ISO9001: 2000 akwụkwọ nyere site SGS.
No.3 omumuihe e tinyere na mmepụta. Mpaghara nke ogbako ruru mita 40000 kpamkpam.
Nwetara asambodo CE.
Ndị isi nke Kọmitii Party Deqing County na Gọọmentị Gọọmentị gara ileta ụlọ ọrụ Huaxiajie ma kwupụta na ha ga-agba ume ma kwado mmepe nke Huaxiajie anyị.
Huaxiajie gara nzukọ 11 nke Asia na Pacific Economic Forum.
Huaxiajie nweta China Top Iri Integrated n'uko Brand.
Companylọ ọrụ anyị nwere usoro mmepụta dị elu site na Germany na Italytali, ikike zuru ezu kwa afọ nke ihe karịrị mgbidi PVC nde mita anọ na ogwe ụlọ, ihe karịrị ngwaahịa 6,000MT PVC, na ngwaahịa 2,000MT ndị ọzọ. Ngwaahịa anyị nwere uru doro anya na ike dị ukwuu, ihe ire ere, ọkụ ọkụ, ihe nrịcha mmiri, mmetụta na-eguzogide, nkwụsi ike dị mfe, ntinye dị mfe, na ndozi dị mfe na wdg. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ karịa afọ 30 na-enweghị nká ma ọ bụ na-agbapụ ma nwee oke dịgasị maka ụdị ụlọ nkwari akụ niile, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ahịa, ụlọ nri na ụlọ obibi dịka ime mma.
1. Họrọ ngwaahịa
2. Zitere anyị nyocha ịntanetị ma ọ bụ site na email
3. Anyị na-ekwu ma kwadebe ihe atụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
4. confirm kwadoro ihe nlele ahụ ma zipụ iwu ịzụta
5. Anyị na-ezitere gị akwụkwọ ọnụahịa proforma na ọnụ ahịa mbupu.
6. Kwadoro na PI ma Mee mentgwọ ，
7. Mgbe anyị natara ugwo ụlọ akụ ileghara mgbe ahụ anyị na-eme ndokwa mmepụta na mbupu ya.
Otu esi akwụ ụgwọ
a. T / T tupu (Nyefee Telegraphic) maka ihe ndị a:
1 /. onye ahia ohuru
2 /. obere iji ma ọ bụ ihe nlele
3 /. Mbupu ikuku
b. Deposit 30%, mgbe ahụ T / T itule tupu Mbupu, maka ntụkwasị obi ahịa
c. ihe L / C na-enweghị ike ịgbagha agbagha na anya, maka ndị ahịa ochie na iwu olu.
Nọmalị anyị kwesịrị 15 ụbọchị mgbe ugwo, ma ọ bụrụ na ngwaahịa a chọrọ oghe ọhụrụ tooling, ma eleghị anya, kwesịrị oge.
Oge izizi ziri ezi ga-adabere n'usoro ziri ezi na ahịa anyị ga-aza gị.